Etsy ankilan’izay, dia miantso ny governemanta izahay mba hanafaingana ny fandraisana andraikitra amin’ny fiarovana ireo sokatra efa voavonjy ary hanohy tsy tapaka ny fanadihadiana, ka hampihatra ny lalàna sy hanasazy ireo izay rehetra voasaringotra amin’ity raharaha ity, anisan’izany ireo olon-dratsy tsy mataho-tody mpanome baiko sy mpandray tombony amin’izao fanondranana an-tsokosoko izao.
Koa satria ny ankamaroan'ireo sokatra ireo dia saika haparitaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena, dia tsy hainay ny tsy hiresaka momba ny lafiny famarotana an-tsokosoko ireo biby ireo, ary vonona izahay ny hanolo-tànana amin’izay fomba rehetra mety eo amin’ny fiaraha-miasa amin'ireo firenena mpanjifa mba hanafoanana ny tinady eo amin’ny fanjifana sokatra.
Ny famarotana an-tsokosoko ireo zavamanan’aina arovana ireo dia olana iray izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny tontolo iainana, ny fandrosoana ara-toekarena isam-paritra, sy ny firindran’ny fiaraha-monina ary ny filaminana eto Madagasikara. Mbola betsaka ny ezaka tokony hatao mba hanafoanana izao fomba fanao mandika lalàna izao, anisan'izany ny fandraisan'anjaran'ny sehatry ny fampiharana ny lalàna miainga amin’ny fisamborana ireo olona ahiahiana, mandalo amin'ny fanadihadiana ka hatrany amin’ny fanenjehana sy ny fanamelohan’ny fitsarana.
Na dia voafetra aza ny tetibolan'ny fanjakana, dia miantso ny governemanta izahay mba hanome ny hoenti-manana ampy ho an’ireo sampandraharaha miandraikitra ny fiarovana ny tontolo iainana, indrindra indrindra ireo sampandraharaha eny anivon’ny faritra sy ny kaominina mba hahafahan’izy ireo manatanteraka tsara ny asany any amin’ny faritra misy azy ireo avy.
Ity raharaha ity dia tranga lehibe iray ahafahana maneho amin'ny vahoaka Malagasy sy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena fa tsy azo ekena ny fanondranana an-tsokosoko ireo biby voaaro eto Madagasikara ireo, ary ireo izay tompon’antoka amin'izany - na inona na inona andraikitra sahaniny - dia hovoasazy arak’izay heloka nataony.
Ny Masoivoho Amerikana
Ny Masoivoho Britanika
Ny Delegasion'ny Vondrona Eoropeana
Ny Masoivoho Alemana
Antananarivo, 30 Aprily 2018